VariCam 35: ဒုတိယအကြိမ်ကြည့် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » အကြောင်းအရာဖန်ဆင်းခြင်း » VariCam 35: တစ်ဦးကဒုတိယအမျှော်
အဆိုပါ VariCam 35 Panasonic ကအသစ် 4K ကင်မရာ / အသံဖမ်းဖြစ်ပါတယ်။ လုယူသောသူသတိပေးချက် - ပထမအရိပ်အမြွက် NAB 2012 မှာထငျရှားလေ! ဒီထုတ်ကုန်ဟာပုံဆွဲဘုတ်အဖွဲ့-ချွတ်ခုန်တက်ခဲ့ပြီးရောနှောထုတ်လုပ်သူများနှင့် cameramen ကြောင့်ပြီးနောက် lusting ခဲ့သည်! ချိုမြိန်ရှာဖွေနေသင့်ရဲ့ High-end ဘဏ်ဍာကိုစောင့်ရှောက်ကိုကူညီပါ။ သေး Plateau ကြောင်းတိတ်ဆိတ်ရောက်ရှိပြီမဟုတ်လော ထိုအခါကိုယ့်ကိုယ်အစစ်အမှန်အပြစ်တွေကိုသုံးပါတူညီရေးကိရိယာများကို အသုံးပြု. ပထမဦးဆုံးအတန်းအစားညျဘဏ်ဍာသူတို့အား rarified ထွဋ်ရောက်ရှိဖို့တစ်ဦးခြေထောက်-Up ပေးပါ။
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကြည်လင်ပြတ်သားစွာပုံရိပ်တွေနဲ့ချွန်ထက် ထက်သော အရောင်များကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အချိန်အချပ်လျင်မြန်စွာကွယ်ပျောက်ဖြတ်သန်းပြီးနောက်အချပ်အဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောယခုအချိန်တွင်ကိုဖမ်းယူဖို့ကူညီပေးပါ။ အဆိုပါ VariCam 35 သင်ဘယ်တော့မှမပြုမီနဲ့တူသူတွေကိုကျဆုံးခြင်းအရောင်များကိုဖမ်းယူနိုင်သည်, ဒီနှစ်နဲ့နွေရာသီရုံအဆုံးသတ် ... အခုတော့တစ်ဆောင်းဦးလွှတ်ပေးရန်စီစဉ်ထားခဲ့သည်! အဆိုပါ VariCam 35 ကဲ့သို့ tools နှင့်အတူ, ငါတို့သည်ငါတို့၏ပရိသတ်ကိုအကောင်းဆုံးပုံရိပ်ပြသနိုင်ဖို့ enabled နေကြသည်။ သဘာဝတရား၏ညားလှပမှုသို့မဟုတ်လူသားရဲ့တီထွင်မှုများ၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှ Capture ။ 4K ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံထုတ်လုပ်မှု၏ထွန်းသစ်စကမ္ဘာ Panasonic ကန့်တင်သွင်းခဲ့တဲ့ဤနေရာတွင်ဖြစ်ပါတယ်။
ညာဘက် box ကိုထဲက 4096 × 2160 resolution နဲ့, သင်သောအရာတို့ကိုသာထိုအရပ်မှပိုကောင်းသွားကြသည်ကိုငါသိ၏။ အဆိုပါ State-Of-The-Art စူပါ 35mm MOS image sensor ကို, အ dynamic range ကိုအတွက်တိုင်အောင်တဆယ်လေးမှတ်တိုင်များနှင့်အတူ ပို. ပင်ဒီသဘောတူညီချက် sweetens ။ ဤသူအပေါင်းတို့သည်အချက်များ skew, wobble တူသောကန်နှောငျ့အယှကကူညီလျက်, ကိုထိန်းချုပ်ရန်ညာဘက်သိက္ခာချ။ VariCam 35, ပြည်တွင်းရေး 2K, 4K များအတွက် AVC-Ultra ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများရှိပါတယ် HD နှင့် UHD အသံဖမ်း။ အချို့သောတစ်ပြိုင်နက်မှတ်တမ်းတင် options များလိုအပ်ပါသလား? Panasonic ကပေါ်မှာပါ! အဆိုပါ VariCam 35 4K, 2K / UHD ၏တစ်ပြိုင်တည်းအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြု /HD proxy ကိုဖိုင်တွေနဲ့အတူရည်ညွှန်း output ကို။
အထူးကောင်းမွန်သော 35mm ထုတ်လုပ်သူစိတျထဲတှငျရှိခဲ့သောအရာကိုအဘို့အညာဘက်ကိုဖြတ်သည်မဟုတ်လော သင်အလွယ်တကူ Panasonic ကရဲ့2/3"ကင်မရာ module တစ်ခုယူနစ် AU-V23HS1 ကူးပြောင်းနိုင်သည်။ လက်ျာအလုပ်အကိုင်အဘို့အညာဘက် tools တွေ (သင်ကိရိယာများဤအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုရန်ကောင်းမွန်သောအသိရှိပါကဒီမှာငါအကောင်းတစ်ဦးစီးဆင်းမှုယူဆတာပါ) သင့်ပြီးသားချောမွေ့လုပ်ငန်းအသွားအလာပိုကောင်းစေပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, On-set ကိုအရောင်ငယ်များအတွက်လက်ဖက်ရည်အဖြစ်စောင့်ကြည့်မှု, အွန်လိုင်း streaming များနှင့်အတူချောမွေ့စွာယင်းလုပ်ငန်းအသွားအလာတိုးတက်မှုကိုကူညီပေးသည်။
သင့်ကွန်ရက်၏ hit ပြပွဲ၏အသစ်တစ်ခုဇာတ်လမ်းတွဲမှတ်တမ်းတင်? သင်သည်လက်ျာကင်မရာရွေးကောက်တော်မူပြီတကား ကရုပ်ရှင်ရုံအတွက်လုံလောက်သောကောင်းပါတယ်ဆိုပါကကျိန်းသေသငျသညျရှိပါတယ် Episode တီဗီများအတွက်ဖုံးလွှမ်းကြ၏။ အဆိုပါ VariCam 35 တစ် PL မှန်ဘီလူး mount အသုံးချနှင့် optical zoom နဲ့ OLED view finder ပါသည်။ ဘယ်လို LCPM င်သင်မေးနိုငျသလဲ ကောင်းပြီ, code ကိုမော်ဂျူအမြဲကကောင်းမွန်သောဤရှိသည်သင့်! In-ကင်မရာအသံဖမ်းများအတွက် 24-bits သည်အကယ်ဒမီအရောင် Encoding စနစ် (အေ့စ်) & စစ်မှန်တဲ့အချိန်မြင့်မားတဲ့ frame ကို-နှုန်းမှာမှတ်တမ်းတင် (120K အတူမီးလောင်4fps) အတွက်ထောက်ခံမှုလုပ်ငန်းအသွားအလာကူညီပေးသည်။
ယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းသင်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်ဆိုလျှင်, Panasonic ကယင်း၏ P2 Solid-State မှတ်တမ်းတင်မီဒီယာသူတို့ရဲ့နောက်မျိုးဆက်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါ expressP2 ကဒ်တိကျစွာအဆိုပါ 60K ဖမ်းယူခြင်းနှင့်4HDAVC-Ultra အသံသွင်းနှစ်ဦးစလုံးအတွက် (1080 fps အထက်) မြင့်မားတဲ့ frame ကိုနှုန်းထားများလွယ်ကူချောမွေ့ရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့သည်။ အဆိုပါ VariCam2- အ P35 Panasonic ကအသစ်ကလေးများ၏တောင်းဆိုချက်များကိုထားရှိရန်မွမ်းမံခဲ့ကြရသည်။ ပိုကောင်းတဲ့ကင်မရာများပိုကောင်းအစိတ်အပိုင်းများလိုအပ်ပါတယ်နှင့် P2 ဆက်ဆက်၎င်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုလုပ်နေတယ် ဖြစ်ခြင်း ကြောင်းအစိတ်အပိုင်း။ တိုးမြှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တောင်းဆိုချက်များကိုစုံလင်ခြင်းဆီသို့လမ်းဆင်း 256GByte expressP2 Card ကိုခုတ်မောင်း။ သင် VariCam HS ရဲ့ 1080 ကြောင်းဆင်ခြင်သောအခါ memory နဲ့မြန်နှုန်းတစ်ဦးမဖြစ်မနေ-ပြီဖြစ်ကြောင်း HD 240fps တူသော velocious နှုန်းထားများမှာယင်း၏မှတ်တမ်းတင်ပါဘူး။ ဒီကဒ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်တစ်ခုတည်းသော SWIFT မဟုတ်ပါဘူး။ အစာရှောင်ခြင်းလွှဲပြောင်း 2.4Gbps အထိအမြန်နှုန်းကိုလည်း (ကဏ္ဍ / စာမျက်နှာ / ပိတ်ပင်တားဆီးမှုပျက်ကွက်ရာမှပြန်လည်နာလန်ထူဖို့စွမ်းရည်အပါအဝင်) တစ်ဦး RAID စနစ်၏အလားတူ flash မှတ်ဉာဏ်အမှားဆုံးမပဲ့ပြင်မှုစနစ်နှင့်အတူထည့်သွင်းထားပါသည်။ အကြမ်းခံ & မတ်ခြင်း, expressP2 စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးအပေါ် VariCam 35 နေရာကူညီပေးသည်။
အဆိုပါ VariCam 35 လေးမီဒီယာ slot နှစ်ခုရှိပါတယ်: expressP2 နှစ်ခုနှင့် microP2 နှစ်ခု။ လျှင်အဖြစ် အဆိုပါ VariCam 35 အလုံအလောက်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတွေနဲ့ထုပ်ပိုးမ ပြီးသား, အဆိုပါ microP2 လည်းစားပွဲပေါ်မှာမှအတော်ကြာသပ်သပ်ရပ်ရပ်သော့ချက် features တွေတတ်၏။ အနုပညာမှတ်ဉာဏ်ကဒ်၏ဤပြည်နယ် UHS-II ကိုလိုက်နာသည်။ ယခုထက်ကျော်လွန်၏ဘုံရန်၎င်း၏အသုံးဝင်မှုကန့်သတ်ရန်လိုဘဲ, Panasonic ကပင်သင်သည်သင်၏အဟောင်းအချို့ကိုနှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက်ထဲသို့ microP2 plug နိုင်ပါတယ်တစ်ခု adapter ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ Panasonic ကကင်မရာများ။ အဆိုပါ expressP2 လိုပဲ microP2 drive ကိုမြန်ဆန်လွှဲပြောင်းလွယ်ကူချောမွေ့ရန်, USB 3.0 interface ကိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါ microP2 တစ်ဒါဇင်ကြိမ် quotidian SD ကမီဒီယာထက်ပိုမြန်, ကြှနျုပျတို့အားလုံး P2 ဘောင်နှုန်းထားများအနေဖြင့်မျှော်လင့်ထားခြင်းငှါလာကြပြီစံနမူနာအရေးအသားဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးမျိုးသောပုံစံများနှင့် codec ကိုရဲ့ရရှိနိုင်နှင့်အတူပေါင်းစပ်ခုနှစ်, အတန်းအစား 10 SDHC / အဆင့် SDXC ကတ်များ P2 ထုတ်ကုန်များတွင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ flash memory အမှားဆုံးမပဲ့ပြင်မှုစနစ် & အကြောင်းအရာကာကွယ်မှု, စိစစ်အတည်ပြုများအတွက်နေရာလေးကို QR ကုဒ်ကိုအတူစနစ်ရဲ့ဘက်စုံမှဖြည့်စွက်ပေးသည်။
သူတို့က VariCam 35 များအတွက်အစိတ်အပိုင်းများကိုတပ်ဆင်သောအခါ Panasonic ကတကယ်မှတ်တိုင်များဆွဲထုတ်။ အဆိုပါ microP2 ကျိန်းသေအပူခုခံအတူနောက်ဆုံးမှ built သည်, သင်၏ data တွေကိုလေဆိပ်ရှင်သန်အထောက်အကူပြုသံလိုက်-ရောင်ခြည် x ။ ရေ, အငြိမ်, ဖုန်မှုန့်, & ဝတ်ဆင်မှုကြောင့်ပျက်ကွက်၏အခြားအများဆုံးဖွယ်ရှိနညျးလမျးကိုဖုံးလွှမ်း manhandling မှခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ Aframe, မိုဃ်းတိမ်နှင့်အတူ Panasonic ကယ့်ပြည်ထောင်စု၏သားစဉ်မြေးဆက် - ဤကင်မရာအသစ်ပင်ပိုမိုအသုံးဝင်စေရန်, သင်သည်အခြားသပ်သပ်ရပ်ရပ် tool ကိုအတူကသုံးပြီးစဉ်းစားပါလိမ့်မယ်။ ငါသည်သင်တို့၏စိတ်ကူးစိတ်သန်းထိုဖြစ်နိုင်ခြေထားခဲ့ပါလိမ့်မယ်။ ဒီကင်မရာကိုလုပျနိုငျလှပတဲ့အလုပ်တချို့၏တစေ့တစောင်းဖမ်းရန်, ဒီ link ကိုထုတ်စစ်ဆေး & မှာဗီဒီယိုကြည့်ရှု: vimeo.com/105522587
2K / HD ကို 4K 4K / UHD AVC-Ultra ကုဒ်ပြောင်းကိရိယာများ အကြောင်းအရာ Panasonic က Varicam Varicam 35 2014-09-30
ယခင်: အဆိုပါ HPA တီထွင်ဖန်တီးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအင်ဂျင်နီယာ Excellence Awards ဆုပေးပွဲနှင့် HPA တရားသူကြီးမှတ်စာဆုကို၏ 2014 Winners ကြေညာ
နောက်တစ်ခု: trilogy ပာစကော့တလန်ဆန္ဒခံယူပွဲအဘို့အ comm Links များပေး